MOTO HYDRANT VALVE Vatengesi uye fekitori - China MOTO HYDRANT VALVE Vagadziri
Moto hosi rack
Moto hose reel
Din kumhara vharafu pamwe stor ...
4 nzira inotonhorera inlet
Moto hose reel kamwene
TCVN kumhara vharuvhu
Tsananguro: TCVN yekumhara vharafu ndeye 45 degree vharuvhu inoitwa zvinoenderana neTCVN zviyero. Ose ari maviri ekupinda uye saizi yekubuda ndeye BSP tambo. Huru hukuru hwakaita 50mm, 65mm, etc. Iyo vharuvhu muviri uye zvishongedzo zvakagadzirwa nendarira, izvo zvinobudirira zvinovandudza kumanikidza kuramba kwechigadzirwa. TCVN yekumhara vharafu chikamu chemoto kurwisa system, uye basa rayo kupa sosi yemvura yekurwira moto. Iko kushanda kwekumanikidza kwemoto wemvura kazhinji kuri mukati me16bar, uye ...
Tsananguro: Breeching Inlets akaisirwa kunze kwechivako kana chero nzvimbo inowanikwa zviri nyore muchivako nekuda kwekudzimisa moto nevashandi vemoto kuti vawane iyo inopinda. Breeching Inlets akaiswa inlet kubatanidza pane moto brigade yekuwana nhanho uye yekubuda kubatanidza pane yakatarwa mapoinzi. Inowanzooma asi inokwanisa kubhadhariswa nemvura nekupomba kubva kumidziyo yemoto. Kana moto ukaitika, pombi yemvura yerori remoto inogona kukurumidza uye nyore kugadzirisa ...
Din kumhara vharafu ine storz adapteri ine cap
Tsananguro: DIN moto wemagetsi ndeye 45 degree vharafu inogadzirwa zvinoenderana nematanho eGerman. Ose ari maviri ekupinda uye saizi yekubuda ndeye BSP tambo. Huru hukuru i25mm, 40mm, 50mm, 65mm, etc. Iyo vharuvhu muviri uye zvishongedzo zvakagadzirwa nendarira, izvo zvinobudirira zvinovandudza kumanikidza kuramba kwechigadzirwa. DIN moto wemvura inhengo yemoto kurwisa system, uye basa rayo kupa sosi yemvura yekurwira moto. Iko kushanda kwekumanikidza kwemoto wemvura kazhinji kuri mukati ...
Pressure achidzikisa vharafu E mhando
Tsananguro: E mhando kumanikidza kudzikisira vharafu imhando yekumanikidza inodzora hydrant vharafu. Aya mavhavha anowanikwa aine flanged inlet kana screwed inlet uye anogadzirwa kutevedzera BS 5041 Chikamu 1 chiyero nekutakura hosi yekubatanidza uye isina chivharo cap inoenderana BS 336: 2010 standard. Iwo mavhiri ekumisikidza akarongedzwa pasi pesimba kumanikidza uye akakodzera kuti ashandiswe pane yezita rekuti inlet kumanikidza kusvika pamakumi maviri emabhawa. Zvemukati kukanda magumo evharuvhu yega yega ndeyemhando yepamusoro kuona kudzikira kuyerera ...
2 nzira inotonhorera inlet
Tsananguro: Breeching Inlets akaisirwa kunze kwechivako kana chero nzvimbo inowanikwa zviri nyore muchivako nekuda kwekudzimisa moto nevashandi vemoto kuti vawane iyo inopinda. Breeching Inlets akaiswa inlet kubatanidza pane moto brigade yekuwana nhanho uye yekubuda kubatanidza pane yakatarwa mapoinzi. Inowanzooma asi inokwanisa kubhadhariswa nemvura nekupomba kubva kumidziyo yemoto. Makiyi Anokosha: ● Chinyorwa: Cast iron / Dutile iron ● Inlet: 2.5 ”BS pakarepo murume co ...
2 nzira moto wemagetsi
Tsananguro: 2 Way Moto (Mbiru) Hydrants ndeye Wet-barrel moto ma hydrants ekushandisa mumvura-yekupa sevhisi nzvimbo dzekunze uko mamiriro ekunze ane hunyoro uye kutonhora tembiricha hazviitike. Iyo yemvura-dhiramu yemvura ine imwechete kana anopfuura mavharuvhu akavhurika pamusoro pevhu pasi, uye pasi pechinyakare mashandiro ezvinhu, mukati mese yemvura inoiswa kumanikidza kwemvura nguva dzese. Makiyi Anokosha: ● Chinyorwa: Cast iron / Dutile iron ● Inlet: 4 "BS 4504/4" tafura E / 4 "ANSI 150 # ● Outlet: 2.5" femal ...
Marine kurudyi angled vharafu
Tsananguro: Marine akakona mavharuvhu mhando yeglobhu pateni hydrant mavharuvhu. Aya mavhavha emhando anowanikwa aine flanged inlet kana screwed inlet uye anogadzirwa kutevedzera marine standard. Iwo mavhavha emakona akaiswa pasi pesimba rekumanikidza uye anokodzera kushandiswa pane yezita rekuti inlet kumanikidza kusvika gumi nembiri mabara. Kukanda kwemukati kunopedzwa kwevhavha yega yega ndeyemhando yepamusoro kuverengera kudzika kwekuyerera kunosangana neyakajairwa mvura kuyerera bvunzo inodiwa.
Ngirozi yakarurama vharuvhu
Tsananguro: Angle Landing Valve imhando yepasi rose pateni yemagetsi vharuvhu. Aya mavhageji emhando yekumhara mavharuvhu anowanikwa nehurume hwekuburitsa kana hwevakadzi kunze uye anogadzirwa kutevedzera FM &UL muyero Iwo maAngle ekumhara mavharuvhu akaiswa pasi pesimba rekumanikidza uye anokodzera kushandiswa pane zita rekuti inlet kumanikidza kusvika gumi nembiri mabara. Kukanda kwemukati kwekupedzisa kwevhavha yega yega ndeyemhando yepamusoro kuverengera kudzika kwekuyerera kunosangana neyakajairwa mvura kuyerera bvunzo inodiwa. Kune maviri ty ...
Screw yekumhara vharuvhu
Tsananguro: Oblique Landing Valve imhando yepasi rose pateni yemagetsi vharuvhu. Aya oblique mhando yekumhara mavharuvhu anowanikwa aine flanged inlet kana screwed inlet uye anogadzirwa kutevedzera BS 5041 Chikamu 1 chiyero nekutakura hosi yekubatanidza uye isina kapu cap kutevedzera BS 336: 2010 standard. Iwo mavhiri ekumisikidza akarongedzwa pasi pesimba kumanikidza uye akakodzera kuti ashandiswe pane yezita rekuti inlet kumanikidza kusvika gumi nemashanu mabara. Yemukati kukanda apedza ese mavharuvhu ndeyemhando yepamusoro kuona lo ...
Flange kumhara vharafu
Tsananguro: Flange Landing Valve imhando yepasi rose pateni yemagetsi vharuvhu. Aya oblique mhando yekumhara mavharuvhu anowanikwa aine flanged inlet kana screwed inlet uye anogadzirwa kutevedzera BS 5041 Chikamu 1 chiyero nekutakura hosi yekubatanidza uye isina kapu cap kutevedzera BS 336: 2010 standard. Iwo mavhiri ekumisikidza akarongedzwa pasi pesimba kumanikidza uye akakodzera kuti ashandiswe pane yezita rekuti inlet kumanikidza kusvika gumi nemashanu mabara. Yemukati kukanda magumo evharuvhu yega yega ndeyemhando yepamusoro kuona yakaderera ...
Flange kumanikidza kudzikisira vharafu
Tsananguro: Flange mhando kumanikidza kudzikisira vharafu imhando yekumanikidza inodzora hydrant vharafu. Aya mavhavha anowanikwa aine flanged inlet kana screwed inlet uye anogadzirwa kutevedzera BS 5041 Chikamu 1 chiyero nekutakura hosi yekubatanidza uye isina chivharo cap inoenderana BS 336: 2010 standard. Iwo mavhiri ekumisikidza akarongedzwa pasi pekumanikidza kwakanyanya uye anokodzera kushandiswa pane zita rekuti inlet kumanikidza kusvika pamabhawa makumi maviri. Yemukati kukanda magumo evharuvhu yega yega ndeyemhando yepamusoro kuona yakaderera ...